NextMapping | कामको भविष्य | चेरिल क्रान
कसरी NextMapping™ काम गर्दछ
कुञ्जी रणनीतिहरूको प्रयोग गरी तपाईंलाई नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ कामको भविष्य - हामी तपाइँलाई तपाइँको कम्पनी, तपाइँका नेताहरू र तपाइँको टोलीका लागि अर्को के नक्शा बनाउन मद्दत गर्दछौं र के हुने हो योजना बनाउँछ भविष्यको लागि तयार अब।
के तपाईका नेताहरू अर्को केको लागि तयार छन्? के तपाइँका नेताहरूसँग त्यहाँ पुग्नको लागि आवश्यक परिवर्तनहरू नेतृत्व गर्न भविष्यका कौशलहरू छन्? नेताहरू अब भविष्यमा तयार हुन मद्दत गर्न हामीसँग एकीकृत समाधानहरू छन्।
के तपाईका टोलीहरू फुर्ती र नवीन छन्? हामीसँग तपाईका टोलीलाई सहयोग पुर्‍याउने उपकरणहरू छन् भविष्यका लागि अर्को के सिर्जना गर्दै बदनाम नेताहरू हुन।
के तपाई भविष्यका तयार उद्यमी हुनुहुन्छ? चाहे तपाईं स्थापित व्यवसाय हो वा एक शुरू अप हामी तपाईंलाई म्याप गर्न सक्दछौं अर्को के छ।
रणनीतिक सेवाहरू हामी प्रस्ताव गर्दछौं
मांग मा र वास्तविक समय मा जान्नुहोस्।
नेक्स्टमेपिंगसँग काम गर्नको लागि विकल्पको साथ स्वचालित भिडियो पाठ्यक्रमहरू™ कोच
तपाईंको नेताहरू र टोलीहरूलाई भविष्यका लागि नवीनतम दक्षता र रणनीतिहरूको साथ तयार हुन मद्दत गर्नुहोस्।
तपाईंको भर्चुअल घटना वा प्रत्यक्ष घटनाको लागि तपाईंको मुख्य वक्ताको रूपमा चेरिल क्रानसँग काम गर्दा प्रेरणा, अनुसन्धान, प्रयोगयोग्य रणनीतिहरू र अत्याधुनिक सामग्री तपाईंले पाउनु हुन्छ। अनुकूलित र अन्तर्क्रियात्मक।
अनिश्चित समयलाई नेताहरू र टोलीहरूको लागि उत्तम संसाधनको आवश्यक पर्दछ। हाम्रो प्रमाणित नेक्स्टमेपिंगको साथ काम गर्नुहोस्™ कोच नेतृत्व क्षमता बढाउन, रणनीतिक सोच बढाउन र टाढाको कार्यकर्ता प्रभावकारिता सुधार गर्न।
बुटीक परामर्श फर्मको रूपमा हामी सानोदेखि मध्यम आकारका व्यवसायहरू र व्यवसायीहरूसँग काम गर्छौं भविष्यको व्यावसायलाई प्रमाणित गर्न
र दूर प्रतिस्पर्धा वास्तविकतामा उत्कृष्टता ल्याउन र परिवर्तन नेतृत्व लागू गर्न प्रतिस्पर्धात्मक लाभ निर्माण गर्नुहोस्।
CEO 75% सीईओले कुशल कामदारको अभावलाई भविष्यमा स as्गठनको रूपमा तयार हुन ठूलो अन्तरका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन।
NextMapping मा™ हामी तपाईका नेताहरू र टोलीहरूको सीपको अन्तर पुग्न मद्दत गर्न विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षण विकल्पहरू र दृष्टिकोणहरू प्रदान गर्दछौं।
अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि नेताहरू र उद्यमीहरूले बढी रणनीतिक अन्तरदृष्टि, उपयोगी विचारहरू र नवीन समाधानहरू प्राप्त गर्दछन्
जब साना साथी समूहहरूमा संलग्न हुन्छन्। हाम्रो विशेष NextMapping™ retreats केवल अनुप्रयोग द्वारा हो।
परिवर्तनको गतिमा कसरी सिर्जना र नविकरण गर्ने
कार्य सफलताको भविष्य एक वा दुई 'नायकहरू' व्यवसायमा निर्भर हुँदैन - भविष्य 'हामी' र कसरी नयाँ र परिवर्तनको गतिमा सिर्जना गर्ने बारेमा छ।
Book०% छुटमा अब बुक गर्नुहोस्
NextMapping ™ Blog - अधिक पढ्नुहोस्
94% सर्वेक्षण गरिएको विश्वव्यापी नेताहरूको हो सन्तुष्ट छैन तिनीहरूको नवीनता प्रदर्शनको साथ।
77% कर्मचारीहरु चाहान्छन् व्यक्तिहरू पहिलो - डिजिटल दोस्रो भविष्य को लागी व्यापार लाई रूपान्तरण गर्न को कुञ्जी रणनीति को रूप मा।
16% कम्पनीहरूको रिपोर्ट तिनीहरू हुन् डिजिटल रूपान्तरणको साथ सफल प्रयासहरू।
70% कम्पनीहरूको भन्छन् कि उनीहरू के छैन भविष्यमा तयार प्रतिभा छ।
हामीसँग काम गर्न मन पराइएका केही ग्राहकहरू